Disinfectant, Wipes, Okenye mmekọahụ ngwaahịa - Haicheng
Kpọọ Anyị: +86 13002755777
Email: ụlọ ọrụ mmepụta ihe@haichenghealth.com
Okenye nwere mmeko nwoke na nwanyi
Yantai Haicheng Sanitary ngwaahịa na-anabata gị!
Yantai Haicheng Sanitary ngwaahịa Co., Ltd. emi odude ke Yantai City, Shandong Province, China, a mara mma seaside obodo na elu ala ọnọdụ na-adaba adaba njem. The ụlọ ọrụ na-pụrụ iche na disinfection na ịdị ọcha ngwaahịa mmepụta ụlọ ọrụ. Mgbe afọ 17 nke mmepe, abụrụla ihe dị iche iche nke disinfectants na ndị ọrụ antimicrobial, ngwaahịa ndị okenye, disinfection wipes wipes na akwụkwọ nhicha ahụ na usoro ndị ọzọ nke ndị na-emepụta ngwaahịa, kamakwa ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ ahụike ọkachamara. anyị nwere 100000 ọkwa GMP ọcha omumuihe na akpaka mmepụta akụrụngwa. O nwekwara ikikere mmepụta mmepụta, ikikere azụmaahịa na asambodo nnwale zuru ezu nke ngwaahịa dị iche iche. Anyị nwere ike ịnye OEM na ODM, ndị na-azụ ahịa ụwa ka ha rụọ ọrụ iji gboo mkpa ndị mmadụ gburugburu ụwa maka akụkụ niile nke ngwaahịa ahụike na ndụ ha kwa ụbọchị.
Nwoke igbu oge raygba
Ahụike N95 Masks
Kedu ihe kpatara ịhọrọ HaiCheng?
Afọ iri na asaa afọ mmepụta ihe
Full nke iru eru
Japan 、 Hong Kong 、 Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia wdg
Mgbe-sales ọrụ n'oge omume
Akwa nhicha ahụ
Ezinaụlọ sofa Nhicha
Ihe nhicha Kitchen
Ndị na-ete mmanụ onwe onye
Eco Baby ekpochapụ
Pet na-egbu Spry
Na-asa ákwà Sanitiser
Ekwentị: +86 13002755777
E-mail: ụlọ ọrụ mmepụta ihe@haichenghealth.com
Guzosie ike a enyi na enyi imekọ ihe ọnụ ...
Na Mee 2021, ndị ahịa Hong Kong ndị nyere iwu ka ngwaahịa ụlọ ọrụ ọgwụ ọgwụ na-egbu ọgwụ nyere iwu ka ọtụtụ ụlọ ọrụ mkpochapu mmiri na-ehicha ụlọ ọrụ. N'ihi nkwado gara aga, oge a ka ...
Yantai Haicheng Sanitary Products Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ na-akwụwa aka ọtọ nwere ogo zuru oke na ọtụtụ nsọpụrụ. The ụlọ ọrụ anọwo na mmepe n'ihi na ihe karịrị afọ 17 na nwere ezigbo imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ comp ...
Antibacterial aka na-edozi gel
The antibacterial hand washing disinfectant gel is a disposable disinfectant gel, nke bụ ọhụrụ disinfection ngwaahịa mepụtara anyị ụlọ ọrụ na 2020. Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè igbu nje na nje na aka. Ọ bụ ...